Isayensi kanye nokomoya kuhlobene kanjani? - Mytika Speak
Ikhaya / UNkulunkulu Nokwamoya / Isayensi kanye nokomoya kuhlobene kanjani?
Isayensi ingabonakala njengethayi ebopha kokubili ngokwenyama nangokomoya. Lapho abantu bezama ukuqonda umhlaba ophathekayo, isayensi inikeza lowo mqondo. Lapho abantu bezama ukusebenzisa umqondo kulowo ongokomoya, bavame ukwehluleka. Lokhu kuqinisa okomoya ngokukhombisa ukuthi kunezinto ezingaphezu komqondo ezikhona.
Indodana: Kungani isibhakabhaka siluhlaza?
Ubaba: Amagesi nezinhlayiya ezisemkhathini womhlaba zisakaza ukukhanya kwelanga nxazonke. Ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka kuhlakazekile ngaphezu kweminye imibala ngoba kuhamba njengamagagasi amafushane, amancane. Kungakho sibona isibhakabhaka esiluhlaza okwesibhakabhaka isikhathi esiningi.
Indodana: Uqinisekile ukuthi ayizange nje ipendwe ngaleyo ndlela ngoba umbala ohlaza okwesibhakabhaka umbala wami engiwuthandayo nokuthile laphaya okufuna ukungenza ngijabule noma nini lapho ngibheka phezulu?
Ubaba: Awu… Ngicabanga ukuthi kungenzeka futhi lokho.
Ngibona isayensi nengokomoya njengezinhlangothi ezimbili zemali. Ngenkathi isayensi izama ukuchaza okungabonakala, okungokomoya kugxila kokungabonakali. Labo abafuna ingokomoya banelukuluku lokwazi ngokudalwa kobukhona. Isayensi izama ukuchaza okungaziwa. Akunandaba ukuthi uluphi uhlangothi lwemali oyibukayo, olunye alubonakali uze uluphenye.
Amathegiukuqonda uNkulunkulu isayensi ingokomoya